ချစ်ချစ်ခင်ခင်ရှိကြပြီး မွေးနေ့ပွဲလေး ကို မြေးလေးတွေနဲ့အတူ ကျင်းပရလို့ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ဖေဖေကိုကြည့်ကာကြည် နူးနေတဲ့ နန္ဒာလှိုင် – XB Media Myanmar
ဝါရင့်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ နန္ဒာလှိုင်ကတော့ တစ်ချိန်ကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ထိပ်တန်းအ နုပ ညာရှင်တွေထဲမှာ တစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်ပြီး ယနေ့အချိန်ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အား ပေး မှုကို အခိုင်အမာရယူထားနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တစ်ယော က် ဖြစ် တဲ့ သူမကတော့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်တဲ့ ဇာတ်ကားတွေမှာ အကောင်းဆုံးနဲ့ အပီပြင်ဆုံးသရုပ် ဆောင်လျက်ရှိနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပြီး အကယ်ဒမီဆုတွေကိုလည်း သိမ်းပိုက်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုလေးကိုတည်ဆောက်ထားပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့ သမီးလေးတွေကို ပိုင် ဆိုင် ထားတဲ့ သူမကတော့ မိသားစုလေးကိုအချိန်ပေးကာဂရုစိုက်လျက်ရှိနေခဲ့တာ ပဲဖြစ်ပါတ ယ်။သူ မတို့ မိသားစုလေးကတော့ ပရိသတ်တွေအားကျချစ်ခင်ရတဲ့ ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်မိ သားစု လေး ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ ယခုမှာ မွေးနေ့ပွဲလေးကို မြေးလေးတွေနဲ့အတူ ကျင်းပ ရလို့ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ ဖေဖေကိုကြည့်ပြီး ကြည်နူးနေခဲ့ပါတယ်။
သူမကတော့ ” Happy birthday! ပါးပါးသက်ရှည် ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာပါစေ “ဆိုပြီး မွေး ပွဲလေးပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်မှာ ရေးသားထားခဲ့ တာပဲဖြစမပါတယ်။ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် မြေးလေးတွေနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ နန္ဒာလှိုင်ဖ ခင် ရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကိုပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပြီး အဆိုပါပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူ ရေးသား ထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် ။
Source : Nandar Hlaing’ s Facebook Acc
ဝါရင့္အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ နႏၵာလႈိင္ကေတာ့ တစ္ခ်ိန္ကေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ထိပ္တန္းအ ႏုပ ညာရွင္ေတြထဲမွာ တစ္ေယာက္အပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ယေန႔အခ်ိန္ပရိသတ္ေ တြ ရဲ႕ ခ်စ္ခင္အား ေပး မႈကို အခိုင္အမာရယူထားႏိုင္ခဲ့တာပဲျဖစ္ပါ တယ္။ ျပည္သူခ်စ္အႏုပညာ ရွင္တစ္ေယာ က္ ျဖစ္ တဲ့ သူမကေတာ့ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္တဲ့ ဇာတ္ကားေတြမွာ အေကာ င္း ဆုံးနဲ႔ အပီျပင္ဆုံးသ႐ုပ္ ေဆာင္လ်က္ရွိေနခဲ့တာပဲျဖစ္ၿပီး အကယ္ဒမီဆုေတြကိုလည္း သိ မ္းပိုက္ထားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
ေပ်ာ္႐ႊင္စရာမိသားစုေလးကိုတည္ေဆာက္ထားၿပီးခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ သမီးေလးေ တြကို ပိုင္ ဆိုင္ ထားတဲ့ သူမကေတာ့ မိသားစုေလးကိုအခ်ိန္ေပးကာဂ႐ု စိုက္လ်က္ရွိေ နခဲ့ တာ ပဲျဖစ္ပါတ ယ္။သူ မတို႔ မိသားစုေလးကေတာ့ ပရိသတ္ေတြအားက်ခ်စ္ခင္ရတဲ့ ျပ ည္သူခ်စ္အႏုပညာရွင္မိ သားစု ေလး ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမကေတာ့ ယခုမွာ ေမြးေန႔ပြဲေလး ကို ေျမးေလးေတြနဲ႔အတူ က်င္းပ ရလို႔ ေပ်ာ္႐ႊင္ေနတဲ့ ေဖေဖကိုၾကည့္ ၿပီး ၾကည္ႏူးေနခဲ့ပါတယ္။
သူမကေတာ့ ” Happy birthday! ပါးပါးသက္ရွည္ က်န္းမာ စိတ္ခ်မ္းသာပါေစ “ဆိုၿပီး ေမြး ပြဲေလးျပဳလုပ္ေပးခဲ့တဲ့ ပုံရိပ္ေလးေတြနဲ႔အတူ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာထ က္မွာ ေရးသားထားခဲ့ တာပဲျဖစမပါတယ္။ ခ်စ္ပရိသတ္ေတြအတြက္ ေျမးေလးေ တြ နဲ႔အတူ ေပ်ာ္႐ႊင္ေနတဲ့ နႏၵာလႈိင္ဖ ခင္ ရဲ႕ ပုံရိပ္ေလးေတြကိုျပန္လည္ေ ဖာ္ျပေပးလိုက္ၿပီး အဆိုပါပုံရိပ္ေလးေတြနဲ႔အတူ ေရးသား ထားခဲ့တာ ပဲျဖစ္ပါ တ ယ္ ။
စည်ဖြိုးနဲ့ ခင်လွှမ်းတို့ ဇနီးမောင်နှံရဲ့ မင်္ဂလာဦး ဆွမ်းကျွေးကိုတက်ရောက် ရင်း မထင်မှတ်ဘဲ ရိုက်မိခဲ့တဲ့ပုံလေး ကြောင့် ပရိသတ်တွေတော်တော်များ များရဲ့ စနောက်အရွှန်းဖောက်ခံနေ ရ တဲ့သားညီ